हिन्दु परिवारमा नै दाजुकि दुलही भाईसँग बिबाह गरेर बुहारी बनेर भित्रिइन् ! के हुन्छ अब? – PathivaraOnline
Home > समाज > हिन्दु परिवारमा नै दाजुकि दुलही भाईसँग बिबाह गरेर बुहारी बनेर भित्रिइन् ! के हुन्छ अब?
admin October 20, 2020 October 20, 2020 समाज	0
एजेन्सी । केही घटना सुन्दै अनौठो लाग्छ । समाजले समेत पचाउन सक्दैन तर सत्य स्वीकार्नैपर्छ । दुनियाँमा हरेक क्षण केहि न केही गजबको घटना भइरहेका हुन्छन् । केही त अति रोचक हुन्छन् । विहारमा एक यस्तो विवाह भएको छ जुन सुन्ने मानिसहरु पनि आश्चर्यमा पर्ने गर्छन् । विहारको दरभंगाको जिल्लामा रहेको एक गाउँमा दुलाहाको गाडी जन्ती जान सजिएको थियो । दुलाहा विवाहको लागि गाडीमा बस्नलाई निस्कदै थिए ।
प्रेमिका आफ्नो प्रेमीको गाडीमा अनशनमा बसिन् र विवाह गर्न जिद्दि गरिन् । हेर्दा हेर्दै विवाहमा जान तयार भएका जन्तीहरु सबैजना हेराहेर भए । कुराकानी बढ्दै जान लागेपछि परिवारले प्रहरीलाई बोलायो । प्रहरी पनि तुरुन्त आइपुग्यो । प्रहरी समक्ष केटीले आफूले ४ दिनसम्म केहि नखाएको र जबसम्म आफ्नो विवाह आफ्नो प्रेमीसँग हुँदैन तबसम्म अनशन बस्ने बताइन् ।
प्रहरीले दुलाहा र प्रेमिकालाई कार्यालयमा केहीबेर राखेर मन्दिरमा लगेर विवाह गरिदिएको छ । उता दुलही दुलाहा जन्ती लिएर आउँछ भनेर तयारी अवस्थामा बसेकी थिइन् । यता दुलाहाको विवाह भएपछि दुलहीका परिवार धेरै आक्रोशित भए । यसलाई मथ्थर पार्न जुक्ति निकाले ।
दुवै घरपरिवारको सल्लाह अनुसार दुलाहाको सानो भाईसँग विवाह गरिदिएका छन् । एकैदिन दुई भाईको विवाह भएको छ । तर अनौठो त त्यहाँ भयो दाजुका लागि तयार रहेकी दुलही भाईका लागि श्रीमती र दाजुका लागि बुहारी बनेर त्यही घरमा भित्रिइन् । हिन्दु परमपरामा यो मान्य हुदैन, के होला अब? एजेन्सी
‘सरकारले आ’तंक फैलायो’ भन्दै माधव नेपालले निकाले यस्तो विज्ञप्ति!
ज्ञानेन्द्र शाही पक्राउ परेपछि गरिश्माले दिइन् अहिलेसम्मकै कडा चेतावनी (भिडियो हेर्नुस्)